Taariikhda My Butros » Top 4 Talooyin in aad ka ogaato Dating
Last updated: Sep. 16 2020 | 3 min akhri
Waxaan nahay buuxa talooyin shukaansi meel kasta aynu eegno. Dunida ah oo ay ka buuxaan dad doonayay in ay ka heli mid ka mid ah waxa qof kasta u muuqataa doonayo inay fikirkooda ka dhiibtaan. Oo sidaas daraaddeed waxay inta badan waxay ka dhigaan ka dhawaajin doonaan si sahlan marka Dhab ahaantii, ma aha wax fudud oo dhan. Haddii ay ahaayeen aan jeclaan jirnay dhan ayaa la kulmay nin ama naag ha of riyooyinkayagii ka dib dhan. Sidaas ma doonayo inaan in la yidhaahdo wax la mid ah “Waxaad kaliya si aad u hesho in ka badan wixii aad dib u celineyso oo taga, waayo,.” sababta oo ah haddii nala dhan sameeyo in aynaan u baahan tahay inuu akhriyo talo shukaansi. Sidaas Ma sheeganaya in ay khubaro ah. Maxaan samayn sheegasho waa inay awoodi karaan inay fahmaan. Waxaan nahay oo dhan wada.
Tani waa waxa ugu muhiimsan in la xasuusto marka aad galaan kulanka shukaansi ah. Laakiin sidoo kale waa laga yaabaa in ay ugu adkaa ee la sameeyo in dhaqanka. Oo anigu waxaan qabaa inaan weli ku dhowaad dhammaan dembi simaha sida aanu u malayn in qofkaan aan u jeclaan naga doonayaa in aan si aad u yaab. Laakiin aad si fudud marnaba jacaylka runta ah loo helo hab in. Jacaylka runta ahi waa xiriir ah. Waxaa qof aad arkayn cidda aad tahay iyo waxaad sujuudi waxaa loogu. Ka dib dhan baad u socotaa in ay dhex maraan aad jilitaanka nolosha oo dhan? Laakiin arrintan yimaado masuuliyada a. Taa baddalkeeda waa in aad ixtiraam ah cidda ay yihiin. Markaa tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad rookaha adag laakiin cheesiest of cheesiest ee pop jecel yihiin. Waxaad u baahan tahay si ay u ixtiraamaan sida aad jeclaan laheyd in aad ixtiraamto. Ha isku dayin inaad bedesho midba midka kale. Anigu taas waxaan ka maqlay dadka in ay xiriir joogto ah uu keeno. Wax ka sii xun oo aad samayn karto Waa. Waxa kaliya ee ay keenaysaa in xanaaq iyo dhirif qadhaadh.
Waxyaalaha Little Ma qiimeyn
Waa in aad xukumi sida aad u ciyaaro this on qofka waxaa ugu wacan qaar ka mid xaqiiqo ah sameeyaan sida farta dhexe u weyn iyo in la wined iyo quraacdeen! Laakiin qaldan ee caadiga ah waa in qof walba wuxuu u eg yahay in marka dad badan oo jeclaan lahaa kaliya qoraal ah weydiinaya sida ay maalin yahay. Waxaan maqlay dad sheeganayo in ka hor iyo ka aan u muuqdaan in ay ku heshiiyaan waxa la. Wax A aad u muhiim ah haddii aad iyaga ka qaadan hadiyad waa in aad u baahan tahay si aad u hesho in la ogaado waxa ay jecel yihiin. Waxay muujinaysaa xiiso iyaga iyo cidda ay yihiin. Hadiyadaha generic sida ubaxa, macmacaanka iyo garjarida / cadar jira ganaax bilowga ah, laakiin sida xiriir soconayo beegtid hadiyado aad u ahaado mid shakhsi ah ka sii yara in qofka aad shukaansi.
Haa, tani waa mid adag haddii aad leedahay shaqsiyad xishood. Ma aha in hoose bannaanka in xishood ma jiro qani ah fikradaha-rogaan (Taasi waa sababta ugu badan oo inaga mid noqoto qorayaasha!) laakiin aysan mar walba waa u fududahay in ay kalsooni si ay u muujiyaan iyo in ka heli kartaa jidka aad u heli lahayd jacayl nasiib sababtoo ah qofka uu u hesho si aad u ogaato. Taasi waa sida ay go'aan ka gaarto in ay aad u jecel yihiin ama aanay soo socda soo jiidashada ee bilowga ah. Sida iska cad jeclaan nolosha, jacayl waa isku mid oo aad u baahan doontaa inaad isticmaal dareenkaaga iyo talo ah ee dadka kale in la ogaado waxa ay yihiin xaaladaha waa in aad soo bandhigo ra'yigiisa aad iyo marka ay ugu fiican waa inay aamusiyaan laakiin marka aad u sheegi kartaa iyaga garanayaa kii aad tahay. Waxaad weli noqon kartaa xishood. Taasi waxay noqon kartaa mid soo jiidasho. Laakiin isku dayaan in ay furan aad. Iyo siyaalo ay u caawiyaan in ay noqon doontaa inay galaan kooras ee isgaarsiinta (ama dhowr ah!), sameeyaan koorsooyinka fiidkii, tagtaa toastmasters ama kaliya waxaa ka soo baxay heli naftaada in jawi bulsho badan intii aad awoodid. Waa cabsi laakiin way u qalantaa. Sida hooyaday mar walba yiri, in aadan joojin noloshaada ka mid ah dadka kale.
Soo qaado qofka Waxaad
Wax aad caadi u ah in dadku ay sameeyaan waa in ay qaado qof oo ku salaysan waxa ay qoyska ama saaxiibo qabaa. By dhan waxay ka dhigan tahay talo ku digtoonaada, halkaas oo talo waa macquul ah, sida Haddii ayada / asaga waa maandooriya qof ayaa ku badan tahay raadinaya kaliya kuu ah. Laakiin dadka u janjeedhaan of geliyaan nooca gaar ah sida nooc walba oo nooca qofka aan aado waa mid gaar ah noo. Haddii aad raadinayso hippy ama beatnik a aad marna ay noqon doontaa faraxsan beeralay dal iyo qeybsanaan. Waynayn waxaa ka reeban sababtoo ah dunida shukaansiga waa la saadaalin karin, laakiin marka la eego guud ahaan waxa aanu dhammaan raadinaya qof ku haboon nala waxaana u baahanahay inaan kula qof aan nahay kuwa raaxo leh iyo kuwa na farxad gelineysa. Waa wax fiican la joogay qof sababtoo ah waxay leeyihiin kuwa aad jeceshahay’ seal ee ansixinta. Waxay maaha kuwo iyaga shukaansi. Waxaad tahay. Oo waa inaad iyaga oo aan u sheegi doono waxa la sameeyo si ha u oggolaanina inay go'aan kuu. Iyo kalsooni go'aanada adiga kuu gaar ah oo aad maskaxdaada u gaar ah. Dareenkaaga Your gaar ah jacayl sida caadiga ah waa kuwa sax ah.